धमिरा कि कमिला ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण धमिरा कि कमिला ?
on: १३ भाद्र २०७५, बुधबार ०६:५८ लेख | दृष्टिकोण
धमिरा कि कमिला ?
माइक्रोसफ्ट कर्पोरेशनका मालिक बिल गेट्स भन्छन्, ‘गरीब भएर जन्मनु तपाईंको गल्ती होइन, तर गरीब भएर मर्नु तपाईंको गल्ती हो ।’ हाम्रो मुलुकमा गरीब नै गरीब छौं, धनी १ प्रतिशत पनि छैनन् ।
प्राइभेट जेट, हेलिकोप्टर, रोल्सरोयस, मर्सिडिजबेञ्ज, बीएमडब्ल्यू, पोर्च, फेरारी, कार, पाँचतारे सुविधाको निवास भएको कुनै नेपाली छ यो मुलुकमा ? तर भारत र चीनमा भनेछन् । विदेशमा स्थायी र अस्थायी रूपमा व्यवसाय गर्ने चुनिएका नेपालीहरूको पनि ग्रोसरी, सुपरमार्केट, रेष्टुराँसम्म देखिन्छ । ५ सयदेखि २ हजारसम्मलाई रोजगार दिन सक्ने कोही उद्यमी छ ? हो, यो हामी सबैको हैसियत कमिलाको होइन, धमिराको जस्तो छ । संसारभरि छरिएर रहेका आमनेपालीको प्रगति नै हाम्रो ऐना हो ।
हामी अवसरका अभावले मात्र गरीब छैनौं, मुलुकको शिक्षापद्धति र क्षेत्रगत विशेषज्ञताको कारणले विदेश र विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने स्थितिमा छौं । उदाहरणका लागि सिमेण्ट कारखाना । कुनै पनि सिमेण्ट कारखानामा आवश्यक जनशक्तिको अध्ययन गर्नुहोस् । उच्च ओहोदाका प्रशासक र प्राविधिकहरूको तलब मासिक ५ लाखसम्म पाउँछन् । भत्ता र अन्य सुविधाको त कुरै नगरौं । विप्रेषणबाट भित्रिएको रकमबाट आफ्नो हैसियतअनुसार निवास बनाउँदा पनि नेपालका सिमेण्ट कारखानाले यो तलब सुविधा दिन सक्छ भने हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम कुन जनशक्ति उत्पादन गर्दै छ ? कहाँबाट आउँछन् सिमेण्ट कारखानालाई आवश्यक जनशक्ति ? पुल, बाटोघाटो, नहर, बाँध, सुरुङ बनाउनु पर्दा कति सिमेण्ट खपत होला ? चुनढुङ्गा र बिजुलीमात्र नेपालको अन्य सामान नेपाल बाहिरबाट आयात गर्दा पनि कारखाना जीवित नै छन् भने हाम्रो सरकार र नीतीनिर्माता के हेरेर बसेका छन् ? ६ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको चीनको साङ्घाई शहरले ३ करोड जनताको व्यवस्थापन गरेको छ, झण्डै हाम्रो मुलुक जति नै जनसङ्ख्या । त्यो पूर्वधारमा कति सिमेण्ट खपत भयो होला ? हामी कल्पना गर्न सक्छौं, त्यो आकारको शहर र उन्नति ? हामी धमिरा कि कमिला ? यदि कमिला नै बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला नेपालभित्रका युवालाई अनिवार्य सैनिक सेवामा लगाउने, तलब र पेन्सनको ग्यारेण्टी गर्ने र सुरक्षालगायत निर्माणको काम र कलकारखाना उद्योगमा लगाउने अनि उनीहरूको परिवारका लागि नेपालको सबै जिल्लामा अपार्टमेण्ट बनाउने । गास, बास र कपासको त ग्यारेण्टी भयो नै शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा अहिलेका अस्पताल र विद्यालयहरूको कडाइका साथ अनुगमन गरी स्तर उन्नति गर्ने र नयाँ सैनिक तथा प्रहरी अस्पताल, विद्यालय खोल्दै जान सकिन्छ । आखिर नेपालको अर्थतन्त्र समाज भारत, बेलायत, सिङ्गापुरमा सैनिक र प्रहरीको सेवामा खटिएर आएको विप्रेषणले चलेको नै त थियो । अब नेपालको सम्पूर्ण इच्छुक युवालाई एउटै मालामा बाँधेर लैजाँदा के नै फरक पर्ला र ? सैनिक र प्रहरीमा अनुशासनको मर्यादा हुन्छ । हामी कसैको अधीनमा नबसेको स्वतन्त्र जनतालाई भएकाले सैनिक र प्रहरीजस्तो कडा अनुशासनमा काम गर्नुपर्ने वा गराउनुपर्ने हुन्छ, सीमा र आचारसंहिताभित्र रहेर । फेरि चिन्ता होला, खर्च धान्ने कसरी ? उत्पादन र व्यवस्थापनले खर्च धान्ने हो ।
जलव्यवस्थापनको चर्चा गरौं । मेलम्ची आयोजना ढिलाइले काठमाडौं काकाकुल भयो । धमिराले चलाएको देशमा मात्र यो कथा मान्य होला । हिमताल र खोला नै खोला भएको देशमा पनि पानी नहुनु ठूलो दुर्भाग्य हो । नहर, सुरुङका माध्यमबाट नेपालभरि नै पानी छ्यालब्याल हुनुपर्नेमा ट्याङ्कर कुर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति मात्र जनताको डर हुन्थ्यो भने पानीको पर्याप्तताबाट नै कति जनशक्तिले नेपालमै काम पाउँथे ।
१५ हजार मेगावाट जलविद्युत् परियोजनालाई कति सिमेण्ट र जनशक्ति चाहिन्छ, लेखाजोखा छ ? उत्पादनदेखि वितरणसम्म आयोजनाको रेखदेख, मर्मतसम्भारका लागि ज्यामी, कामदार, इलेक्ट्रिसियन, इञ्जिनीयर, मिटररिडर, प्रशासक कति जनशक्ति आयात गर्नुपर्छ ?
विश्वका धेरै देश र शहर पर्यटन उद्योगलेमात्र सम्पन्न भएका छन् । हाम्रो देश प्रकृतिले नै सुन्दर बनाइदिएको छ । बाटोघाटो, यातायात, सुरक्षा, व्यावसायिक सेवाको व्यवस्थापन गरिदिए पुग्छ । केबलकार, पुलजिप, बञ्जिजम्पिङ, स्केटिङ, जङ्गलसफारी, प्याराग्लाइडिङ, आम्दानीको स्रोत कतिकति ।
रोजगारको नाउँमा अब बसमा खलासी र कण्डक्टरले नगद उठाउने, काउण्टरबाट हातले लेखेको टिकट विक्री गर्ने प्रथा तुरुन्त हट्नुपर्छ । बसपार्कहरूमा दलाल शून्य बनाएर डिजिटल टिकट विक्री गर्नुपर्छ । ठीक समयमा बसहरू छुटाइनुपर्छ र गन्तव्यमा पुर्‍याइनुपर्छ । डिजिटल टिकट तुरुन्तै वितरण गर्न नसकेमा हाते विद्युतीय मेशिनबाट टिकट दिने, यात्री आफैले आधिकारिक व्यक्तिलाई तोकिएको भाडा तिर्छन्, टिकट लिन्छन् । त्यो टिकट यात्राको अन्त्यसम्म राखिनुपर्छ । छड्के जाँचमा टिकट नभेटिएमा यात्रुले दण्ड भोग्नैपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा पहिलोपटक यात्रा गर्ने व्यक्तिका लागि शहरभित्रको यात्रा सहज छैन । मोनोरेल र मेट्रोरेलको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन बोलेजति सजिलो र छिटो सम्भावना छैन । यातायात पर्यटनमैत्री हुन सकेन भने पर्यटकहरूको यात्रा नदोहोरिने पक्कापक्की नै हुन्छ ।
जनताका आधारभूत आवश्यकता भनेका गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै हुन् । हरेक नागरिकको पेशा र व्यवसाय हुन्छ नै तर हरेक नागरिकले राज्यलाई कर तिरेकै हुनुपर्छ । राज्यले हरेक नागरिकको ग्यारेण्टी लिनैपर्छ ।
राष्ट्रको स्रोतसाधनको परिचालन धमिरा होइन, कमिला र मौरीझैं बफादार बनेर गर्ने हो भने ऊर्जा, जल, कृषि, पर्यटन, खानी, खनिज, जडीबुटी, वनजङ्गल र प्राकृतिक सुन्दरताको विविधताले नेपाललाई विश्वमा नेपालको जनतालाई प्रशस्त पुग्ने धन्दा र रोगगारी प्रदान त गर्छ नै विशेष गुरुयोजना बनाएर नेपाल भारतका लागि ट्राञ्जिट बिन्दु बन्न सके सार्कको सिङ्गापुर हुनेमा दुईमत नहोला । तर, धमिरा होइन, कमिलाको जमात बढ्नुपर्‍यो । वीर, इमानदार र मेहनती संसारमा नेपालीमात्र हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर पनि यही हो । सबैले हिम्मत जुटाऔं, सम्भव छ ।